China PVC ịchọ mma mpempe akwụkwọ ExTRUSION ahịrị Imepụta na Factory |Jiahao
PVT Marble Sheet Line bụ efere ọhụrụ a na-achọ mma gburugburu ebe obibi, mkpuchi elu ya na ihe nkiri PVC mgbe ọgwụgwọ UV gasịrị, a na-eme ka ike ya dịkwuo mma, karịa gburugburu ebe obibi, enweghị mmiri, ọkụ na-eguzogide, na-eguzogide ọgwụ, na-adị ire ụtọ ma dị ọcha nke ọma n'elu ala, nguzogide corrosion. .Ọtụtụ ụdị ụdị PVC maka nhọrọ, nke a na-eme ka nhọrọ ahụ dịkwuo mma, ahịa na-anabata ma mara ya.
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ PVT
A na-eji ya eme ihe na kabinet, ọnụ ụzọ na-amị amị, ezinụlọ, KTV, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ mmanya ịntanetị, klọb ntụrụndụ.Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhọrọ akụrụngwa profaịlụ iji mepụta ụdị dị iche iche nke profaịlụ marble PVC, nke na-eme ka ihe ndozi ahụ zuo oke.
Nkọwa ngwaahịa: Ọkpụrụkpụ: 2-6mm, obosara: 1200mm
PVC ji achọ osisi emepụtara PVC gusset osisi mma mmepụta akara na-emi esịnede PVC dị ka isi akụrụngwa, site denaturation ọgwụgwọ, na-agbakwụnye stabilizer, ike gị n'ụlọnga na ndị ọzọ nwekwara.Ọ dị mfe na ịdị arọ, dị mfe ịwụnye, enweghị mmiri na nla.Ụkpụrụ elu na-agbanwe nke ukwuu.Ọ na-eguzogide mmetọ, dị mfe ihicha, ma na-arụ ọrụ dị mma nke ụda na mkpuchi okpomọkụ, karịsịa, mgbakwunye nke ihe ndị na-eme ka ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ na-eme ka ọ dịkwuo mma iji.Plastic gusset efere PVC nwere ike mmiri na-eguzogide na-ehichapụ ihe.A na-eji ya eme ihe n'ime ime na mputa nke ụlọ ọrụ, ụgbọ ala, ụgbọ mmiri, ụgbọ oloko, ụlọ, wdg.
Enwere ike imeju ya, mesie ya ike, sie ike, sie ike, na-egbochi ire ọkụ, gbanwee ya, na elu ya nwere ike ịmegharị na oyi.Okpomọkụ dị elu (ihe dị ka 100 ℃), ezigbo anụ ahụ na akụrụngwa.A na-ejikarị ya na ụlọ ọrụ kemịkalụ, eriri kemịkalụ, nchekwa gburugburu ebe obibi, akụrụngwa akụrụngwa na ụlọ ọrụ ndị ọzọ metụtara ya.
Anyị ụlọ ọrụ absorbs na digests mba ọzọ elu technology na usoro, na mmepe na oké efere extrusion mmepụta akara, nke tumadi ji maka mmepụta nke Pee na ndị ọzọ efere.Ogologo oke nke efere ahụ nwere ike ịbụ 20-60mm, obosara nke efere ahụ nwere ike ịbụ 750-1800mm.
Enwere ike iji ngwaahịa ika a ma ama nke ụwa maka akụkụ dị iche iche nke akụrụngwa ahịrị mmepụta.Ejikọtara ya na ọtụtụ afọ ụlọ ọrụ anyị na-emepụta teknụzụ na-arụpụta efere efere, ọ na-eme ka ọ bụrụ nke a pụrụ ịdabere na ya na nke zuru oke.Ngwaahịa ya nwere ọtụtụ uru, dị ka ezigbo elu, obere nha njehie, nguzogide corrosion, mkpuchi siri ike na ihe ndị ọzọ.
Ahịrị mpempe akwụkwọ eji achọ mma PVT
Ngwaahịa a nwere ọtụtụ ebe dị ka nnọchi nke efere osisi, aluminum-plastic.Ọ na-egosipụta nchebe mmiri, nchebe corrosion, ike ịgbagọ mara mma, enweghị isi na-akpasu iwe, ịdị arọ dị ala, na imegharị ihe.
Ime ụlọ Decoration: A na-eji ya dị ka ihe ịchọ mma elu maka mgbidi dị n'ime, wainscots, uko ụlọ na ngwá ụlọ, wdg Ọ dị mma ịmecha ihe maka ọgbọ ọhụrụ nke oghere ụkpụrụ ụlọ, enweghị mkpuchi, free of formaldehyde, gburugburu ebe obibi enyi na akụ.Ọ kachasị mma maka ịchọ mma nke oghere ime ụlọ nke nnukwu ọrụ, na-egosipụta ịdị mma na ịdị ebube.
Mpempe akwụkwọ ime ụlọ: a na-eme nke ọma na mpempe osisi dị elu yana ihe ọdịda anyanwụ agbakwunyere, na-egosipụta ahụike eke, nka mara mma, mmetụta akụkụ atọ siri ike na imewe ọhụụ.Ha bụ ezigbo ngwaahịa maka ebe obibi okomoko na saịtị, yana ụlọ oriri na ọṅụṅụ ndị nwere ọkwa kpakpando.
Ọkpụrụkpụ ngwaahịa: 0.5-2mm
Nke gara aga: Mpempe akwụkwọ PC siri ike / Ahịrị mpempe akwụkwọ oghere - CHEER
Osote: PVC RIGID CORE Mpempe akwụkwọ EXTRUSION ahịrị
PC siri ike mpempe akwụkwọ / oghere Extrusion Line &...